समाजमा नर्सिङ पेशाप्रतिको सम्मान उच्च छ । संवेदनशील पेसा भएका कारण नर्सको जिम्मेवारी धेरै ठूलो छ । ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्ने नर्सहरूको श्रमको उचित मूल्याङ्कन नभएको गुनासो बेला–बेला आउँछन् । दिन–रात नभनी बिरामीको सेवामा खटिने नर्सलाई जस–अपजस पनि आइरहन्छ । डाक्टर, बिरामी र बिरामीका कुरुवासँगको समन्वयकर्ताको भूमिकामा रहने नर्सहरूको अनुभवबारे विराटनगरको न्यूरो कार्डियो एण्ड मल्टी स्पेसालिटी हस्पिटलको सीसीयू विभागमा कार्यरत नर्स खुश्वु ढकाल यसरी बताउँछिन् ।
नर्स पेशा कत्तिको जोखिमपूर्ण हुन्छ ?
जोखिम त हरेक पेशामा हुने गर्छ । तर, नर्सको पेशामा मानिसहरूको ज्यानसँग जोडिने हुँदा गाह्रो नै हुन्छ । हरेक दिन नयाँ–नयाँ केस हेर्नु पर्दा, बिरामीको हेरचाह गर्ने बेलाका कत्ति रोगहरू हामीलाई समेत लाग्ने डर हुन्छ । क्षयरोग जस्तो सरुवा रोग तथा एड्स लागेको केसमा काम गर्दा निकै डर हुने गर्छ ।
काम गर्दा कहिले आफ्नै तथा बिरामीको हातमा सुइले समेत घोच्ने हुँदा हरेक कुरालाई ध्यान दिएर गर्नु पर्ने हुन्छ । कुनै औषधिहरूले बिरामीहरूमा नकारात्मक असर गरिदिँदा बिरामी सिकिस्तसमेत हुन सक्छन् । २४सौं घण्टा बिरामीसँग बसेर हेरचाह गर्नु पर्ने हुँदा बिरामीलाई केही असहज महसुस भएको खण्डमा नर्सहरूले बिरामीका आफन्तहरूबाट गाली खाने, कुटाइसमेत खाने हुँदा यो पेशा अत्ति नै जोखिमपूर्ण हुन्छ ।
बिरामीहरूको नर्सप्रतिको व्यवहार कस्तो हुन्छ ?
बिरामीहरू आउँदा नर्सहरूप्रति गर्ने व्यवहार राम्रो नै हुन्छ । सक्दो राम्रो गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि बिरामीहरूलाई कहिलेकाँहि नगरेको जस्तो महसुस हुने हुँदो रहेछ । यसकारण कहिलेकाँहि बिरामीहरू हामीलाई सहयोग नगर्ने, छिट्टै रिसाउने गर्नु हुन्छ ।
तर, हाम्रो पेशा बुझ्ने बिरामीहरूले चाँहि माया गरेर राम्रो व्यवहार देखाएर सहयोग गर्नु हुन्छ । कतिपय बिरामीहरूले राम्रो काम र व्यवहार देखाएको भन्दै धन्यवाद दिएर जानुहुन्छ । धेरै काम गरेको देख्दा बिरामीहरूले तपाईँ त थाक्नु भयो होला आराम गर्नुस् भनेको सुन्दा निकै खुशी लाग्छ ।
नर्सहरूप्रति बिरामीहरूको आफन्तको व्यवहार कस्तो हुन्छ ?
आफन्तबाट हेरि–हेरि व्यवहार हुन्छ । कोहीले राम्रो गर्नु हुन्छ भने कोहीले एकदम नराम्रोसमेत गर्नु हुन्छ । कोहीलाई एक पटक भन्दा नै बुझेर अस्पतालको नियमहरूको पालना गर्नु हुन्छ र हामीले बिरामीलाई गरेको हेरचाह देखेर खुशी हुनेसमेत गर्नु हुन्छ । तर, कति बिरामीहरूलाई हेर्न आउने व्यक्तिहरूले सम्झाउँदा नि नबुझ्ने, रिसाउने, झर्किने जस्ता व्यवहार देखाउनुका साथै बिरामीको हेरचाह नगरेको आरोपसमेत लगाउने गर्छन् ।
डाक्टरको व्यवहार चाँहि कस्तो प्रकारको हुन्छ ?
डाक्टर अनुसार व्यवहारमा फरक त पक्कै आउँछ । तर, सीसीयु डिपार्टमेन्टमा काम गरेको मेरो साढे वर्षको कार्यकालमा डाक्टर तथा नर्स सबै एकै परिवारसरह मिलेर काम गरेको महसुस हुन्छ । कसैलाई केही समस्या पर्दा सबै जना मिलेर एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गर्छौं । डाक्टरहरूले गाली नगर्ने भने होइन, गल्ति भएको खण्डमा बिरामी तथा आफन्तको अगाडिभन्दा पनि बिरामी भएको ठाउँबाट अलि पर लगेर सम्झाउने गर्नु हुन्छ ।
डाक्टर र बिरामीका कारणले कतिको प्रेसर महसुस हुन्छ ?
कार्डियो डिपार्टमेन्टमा कतिखेर बिरामी सिकिस्त पर्ने, वा सिकिस्त परेका बिरामीहरू हुने हुँदा एकदम सावधान भएर बस्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा छोटो समयमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने, डाक्टरले भनेको सबै मान्नु पर्ने, कामको प्रेसर धेरै पर्ने, यतादेखि उता कुद्नु पर्ने, थाकेको समयमा पनि एकछिन बस्नसमेत नपाइने साथै केही सामान, दबाई सबै ल्याउनु पर्नेहुन्छ र कहिलेकाही बिरामीको रिपोर्ट आउन ढिला हुँदासमेत डाक्टर र बिरामीको कुरा सुन्नु पर्दा चाँहि निकै निराश भइन्छ ।
चाडपर्वको समय छ, यस्तो बेलामा परिवार र कामलाई कसरी म्यानेज गर्नु हुन्छ ?
नर्स भएपछि कत्ति कुरामा सम्झौता गरेर एडजस्ट हुने बानी बसाउनु पर्ने हुन्छ । धेरैजसो चाडपर्वमा पनि अस्पतालमै डिउटी गरेर खुशी हुनु पर्छ । नजिकै घर भएकाहरूलाई खासै गाह्रो नहोला तर, मेरो घर टाढा भएको हुँदा हरेक चाडपर्वमा घर जान नपाउँदा चित्त त अवश्य दुख्छ ।
परिवारका सदस्यहरूले पनि डिउटी छ भन्दा बुझिदिनु हुन्छ । हाम्रो नियमअनुसार दसैं वा तिहारमा एक पटक मात्र छुट्टी लिन मिल्छ । दसैंमा डिउटी परेको हुँदा घर गएर टीका लगाएर आइहाले । यसपटकको तिहार चाँहि घर बसेर मनाउने विचार गरेको छु ।
धेरैजसो नर्सहरू पढेर विदेश नै जान खोज्छन् । के कारण हुन सक्छ ?
पढेर राम्रो जागिर र पैसा कमाउने रहर सबैको हुन्छ । नेपालमा धेरै पैसा खर्च गरेर पढ्दा पनि राम्रो काम पाइँदैन् । राम्रो ठाउँमा काम गर्नका लागि कि चिनेको मान्छेले सोर्स लगाउन सक्नु पर्छ, कि एकदम प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र राम्रो काम पाउँछन् । प्राइभेट अस्पतालमा तलब एकदम नै कम हुन्छ । कलेजको फी धेरै हुने, काम गर्दा तलब थोरै पाउने, यहाँ धेरै दुःख गर्दा थोरै कमाइ हुन्छ तर, बाहिर विदेशमा दुःख गर्नुपरे पनि दुःख गरेअनुसारको तलब पाइने हुँदा पैसा कमाउनका लागि नै विदेशिने गर्छन् ।
नर्स पढ्न रुचाउनेहरूलाई कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
कतिजना आफ्नो मनले नर्स पढ्न र बन्न आएका हुन्छन् । कोही परिवारको प्रेसरले समेत आउने गर्छन् । एकपटक यो पेशा अपनाएपछि एकदम मन लगेर पढेर, बिरामीको हेरचाहमा केन्द्रित हुनुपर्छ । मानव सेवालाई नै धर्म सोचेर फ्लोरेन्स नाइटएङ्गल जस्तै नाम कमाउन सफल हुन सक्नु पर्छ । नर्सको नाममा धेरै नराम्रा कुराहरू बारम्बार आइरहने हुँदा एकजनाको कारणले यस पेशामा लाग्ने हरेकको बेज्जत हुन सक्ने, अरुले हेप्नसमेत सक्ने हुँदा यस पेशालाई हृदयदेखि अपनाएर मेहेनत गरेर पढ्नुका साथै बिरामीको उपचार गर्दा अल्छी र दिक्क नमानी गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति अंकिता ताम्राकार